MARESAKA be ao amin’ilay toerana anaovana fanorenana any Warwick, any Etazonia, sady be dia be ny asa. Io ilay toerana vaovao hisy ny foiben’ny Vavolombelon’i Jehovah eran-tany. Rahalahy sy anabavy an-jatony no mitondra ny anjara birikiny. Nahafoy zavatra maro izy ireo nefa betsaka no nilaza hoe: “Tsy atakalonay na inona na inona mihitsy ny miasa eto.” Fa inona tokoa no mitranga any?
Inona no mitranga any Warwick?
“Tsy resaka fanorenana trano fotsiny ny eto Warwick. Nataon’i Jehovah tafaray ny ekipa mpanao fanorenana maro. Izahay koa nampiany mba handinika indray ny fanaovanay planina tetikasa lehibe, sao misy azo hatsaraina.”—Enrique Ford.
“Hoy ny Salamo 127:1: ‘Raha tsy i Jehovah no manao ny trano, dia very maina ny asa mafy ataon’ny mpanorina azy.’ Asehon’izany fa tsy ho vita mihitsy io tetikasa io raha tsy eo ny fitahian’i Jehovah.” —Troy Snyder.
“Tena nanatanjaka ny finoako ny miasa eto, ary mbola tsy nahatsapa an’izany mihitsy aho hatramin’izay.”—Richard Devine.
Nety tsara ny fiainan’ny mpivady iray, nefa niala tao amin’ilay trano tena tiany izy ka nifindra tao amin’ny trano kely iray. Nahoana?